Ny studio Ramotion dia mampiseho ny fizotran'ny famoronana sary | Famoronana an-tserasera
Ny fizotry ny famoronana sary famantarana avy amin'ny pensilihazo mankany amin'ny endrika farany
Dimy ambin'ny folo andro lasa izay dia nanana fahafahana niditra tao amin'ny dingana famoronana amin'ny famoronana sary famantarana avy amin'ny tanan'ny iray amin'ireo mpamorona ankehitriny tsara indrindra toa ny dia Aaron Draplin. Lahatsary iray ahitantsika ny fomba nitondran'ity mpamorona endrika ity azy ireo avy amin'ny hoe inona ny hevitra ka hatramin'ny inona ny fikarohana ny endrika farany ho an'ny orinasan'ny sary famantarana iray.
Androany dia azontsika atao ny manatona akaiky kokoa ny fizotry ny famoronana amin'ny famoronana sary famantarana hafa, izay ahitantsika ny maha-zava-dehibe ny logo. sary hanao sketsa samihafa mba hahafantarana ny endrika farany.
Avy amin'ny studio Ramotion manana vintana lehibe isika amin'ny fidirana amin'ity fizotrany ity izay atombony amin'ny fanaovana sarina famaky tsotra sy endrika boribory mba hahitana ireo andalana sy endrika ho hitan'ilay sary voalohany.
Voapetraka aloha io dia efa tadiavina endrika sy vahaolana samihafa hivoitra amin'ny hevitra farany. Raha vantany vao vita io dia mametraka hevitra maromaro misesy izahay mba ho mora kokoa ny manapa-kevitra amin'ny iray, toy ny mitranga ao anatin'ireo andiana takelaka ahazoantsika miditra amin'ireo andalana ireo.
Ity manaraka ity dia ny sonia izay miaraka amin'ny sary famantarana izay alaina amin'ireo dingana mitovy etsy ambony, kisarisary haingana handeha hitady ireo andalana tianao haleha rehefa avy eo mametraka ny valiny farany.
Hetsika lehibe iray nataon'ny fandinihana ny asehoy anay ny dingana manaraka mahita logo tsara. Tsy ny zava-drehetra dia mampiasa programa izay ahafahana mampiasa ny curves beizer mba hahitana ny endrika mety, mandalo be ny fampiasana pensilihazo sy ny famafana mba hanatonana ny fomba isan-karazany. Ny faharetan'ny tanana voaofana dia tsy mora ny mahita ao anaty programa famolavolana.
Manana ny tetikasa ianao hatrizay Dribbble.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny fizotry ny famoronana sary famantarana avy amin'ny pensilihazo mankany amin'ny endrika farany
Timothy Samara: Fitsipika 20 momba ny famoronana endrika tsara
Tahiry matihanina: loharanom-pahalalana Mega-Pack mitentina $ 5000 ... $ 49 ihany!